Inona ny saram-pifanarahana momba ny fikojakojana? - Easy Multi Display
Inona ny vola karama amin'ny Fikojakojana?
Noforonina On Febroary 26, 2020
Inona ny fifanarahana amin'ny fikojakojana ny rindrambaiko?
Ny fifanarahana momba ny fikojakojana ny rindrambaiko dia fifanarahana iraisana hita ao amin'ny indostrian'ny rindrambaiko. Fifanarahana eo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa rindrambaiko izay miantoka ny fampiasana ny rindrambaiko amin'ny lafiny roa. Midika izany fa ny mpamatsy rindrambaiko manaiky fa mitazona sy manavao ny rindrambaiko hany ka manohy mivaona amin'ny fomba mahomby izy ary miakatra amin'ny alàlan'ny fandrosoana ara-teknika sy ny ahiahy momba ny filaminana. Amin'ny maha-mpanjifa anao dia manao sonia fifanarahana fikolokoloana ianao mba hahazoana antoka fa mahazo fidirana amin'ireo fanavaozana ireo raha vantany vao navotsotra izy ireo.
Ohatra, tsy maintsy mitaky serivisy isan-taona ny fiaranao, angamba ny fiovana solika na ny fanodinana kodiarana. Ny fanamboarana rindrambaiko koa dia mila fanamboarana mitovy amin'izany mba hiantohana ny fahombiazana farany, satria miova haingana ny tontolon'ny teknolojia.
Inona no fifanarahana amin'ny fikarakarana EMD?
Manolotra ny mpanjifa tsirairay ny fahafahana hanana fampiasam-bola amin'ny fifanarahana fikojakojana ho an'ny Easy Multi Display. Raha misafidy ny hiditra ianao, dia homena karama 20% amin'ny vidin'ny rindrambaiko ianao, isan-taona.
Manampy anao hahazo tombony vitsivitsy fanampiny ny fisafidianana:
Matokia fa rehefa mandroso ny teknolojia, dia toy izany koa ny EMD Software.
Rehefa mangataka ny fanovana ny EMD ny mpanjifa hafa dia ho afaka hiditra amin'ireto endri-javatra fanampiny ireto ianao, toy ny mpampifandray karazana vaovao vaovao.
Ahoana raha tsy manao sonia ny fifanarahana momba ny fikolokoloana aho?
Tsisy olana! Azonao atao ny manohy mampiasa Easy Multi Display ary io ny dikan-tenanao ankehitriny dia hanohy miasa tahaka ny ankehitriny. Na izany aza, tsy ho afaka hiditra amin'ny endri-javatra fanampiny ianao izay mety ho novolavolaina na ampiana amin'ny rindrambaiko mandritra ny taona. Ny endri-javatra toa izany dia ny fahafahanao mampiasa karazana loharanom-baovao isan-karazany ho an'ny fampisehoanao.
Mba hahazoana fidirana amin'ireto endri-javatra ireto dia mila mandoa ny saram-pampandrosoana ny rindrambaiko izay mety mihoatra ny 20% ny fikojakojana izay nataonao nandritra ny taona.
Raha liana amin'ny rindrambaiko Easy Multi Display izahay dia kitiho Eto hampidina ny kinova fitsapana anay. Mba hanomezana fahafaham-po ny orinasa rehetra (manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra), dia namorona kinova Easy Multi Display izahay. Ny kinova voalohany (One Screen) an'ny rindrambaiko dia mitentina 149 $, ny faharoa (Standard) izay ny safidy malaza indrindra dia mitentina 499 $ ary farany ny kinova "Enterprise" izay mitentina 899 $. Aza misalasala mijery ny safidinay na mifandraisa aminay raha mila fampahalalana bebe kokoa!
Ny fampirantiana nomerika lehibe indrindra an'ny Lord Ram dia mamiratra ao amin'ny New York Times Square
Fa maninona ny teknolojia LED no ho avin'ny signage nomerika anatiny?
Manamboatra ny ho avin'ny signage nomerika